Nokuba ubukwishishini ngaphezulu kweminyaka elishumi okanye malunga nokuba uqale ngokwakho, ukuba nobukho obuqinileyo kwi-Intanethi yophawu lwakho akunakuphikiswa. Njengoko une-ofisi yezitena nodaka yeshishini lakho elingaphandle kwe-intanethi, kufuneka ubekho kwi-Intanethi ukuba abathengi bakho kunye nethemba lakho banokuzibandakanya nehlobo lwakho. Kwaye ekuphela kwendlela onokuthi utsale ngayo, uyonwabe, kwaye ukhulise isiseko sakho sabathengi kwi-intanethi ngokuba newebhusayithi ebonakalayo, esebenzayo. Ngethamsanqa, ufumene ithuba lokukhupha le nxalenye ebalulekileyo yeshishini lakho kwiqela elidumileyo nelithenjiweyo leengcali kwi-Semalt.
I-analytics yewebhusayithi ngumlinganiselo kunye nohlalutyo lwedatha efanelekileyo ukuqonda indlela yokuziphatha kwabandwendweli bakho. Ngokuseta idatha efanelekileyo, unokwenza izigqibo ezinolwazi kwaye wenze iingqikelelo malunga nokuba abaphulaphuli bakho baya kuba yintoni kwixesha elizayo. Kwakhona, xa uxhobile ngale datha, unokucwangcisa kwaye wenze umxholo oluncedo ngakumbi kwiindwendwe zakho, kwaye, nazo, ziya kuba ngabathengi abathembekileyo kwi-brand yakho.
Kuya kufuneka uqaphele idatha oya kuyilinganisa kwaye uphonononge ukusebenza kwendawo yakho kunye nezimpawu eziphambili zokusebenza ezikhuthaza ukukhula kweshishini lakho, njengokutshintsha kokuthenga, inani leendwendwe, amaphepha avakatyelelwa rhoqo, njl. Nangaphandle kokufumana abantu abaninzi kwiwebhusayithi yakho, ngoncedo lwezixhobo ezifanelekileyo zohlalutyo lwewebhu, unokulungelelanisa idatha yakho ukuze ufezekise iinjongo zakho zeshishini.
I-SEO sisishwankathelo sokuSebenza kweNjini yokuKhangela, kwaye kukuphuculwa okuqhubekayo komgangatho kunye nenani lokugcwala kwiwebhusayithi yakho ngeziphumo zenjini yokukhangela. Njengoko usungule ubukho be-Intanethi kwishishini lakho, kuyakufuneka udale umxholo onyanzelayo kunye nomtsalane, umdla, kwaye uqinisekise abaphulaphuli bakho ukuba bazibandakanye nophawu lwakho. Ngolwazi kunye nokuphunyezwa okufanelekileyo kweendlela ezilungileyo ze-SEO, unokudala umxholo osemgangathweni ophezulu kumaphepha enjini yokukhangela (i-SERPs) kwaye utsala iindwendwe kwiwebhusayithi yakho. Uninzi lweendwendwe onazo kwiwebhusayithi yakho, ayanda amathuba akho okukholisa abantu abaninzi ukuba babe ngabathengi bakho.
Nanku umzekelo wendlela amanqaku amanqaku e-SEO aphezulu ngayo kwii-SERPs, kwaye kuya kuba yinjongo yakho yeshishini ukuba kwinqanaba eliphezulu kumagama aphambili kwi-niche yakho yeshishini.
Isikhundla esiphakamileyo kunabantu abakhuphisana nabo kwaye ubandakanye abathengi ngokusebenzisa amagama aphambili emsila. Ukuzibandakanya okuphezulu kunye nomgangatho ophezulu wokunikeza kukunika umda xa abathengi kunye namathemba ngokufanayo bafuna umxholo osombulula iingxaki zabo.
Siyayiqonda indlela ekubaluleke ngayo ukubakho kweshishini lakho kwi-Intanethi kwisiseko somthengi wakho kwaye, kubaluleke kakhulu kumgca wakho ongezantsi. Xa udibana nathi, sikuqinisekisa ukuba akunandaba namava akho amabi kunye nezinye iiarhente zedijithali, sizinikezele kwaye sizimisele ukutshintsha ingxelo. Unokuthatha inyathelo elinesibindi namhlanje ukuya kwisabelo esihle sabathengi kunye nethemba kwi-niche yakho nokuba ungakanani okanye ungakanani na ishishini lakho.
Iingcali zethu ezinetalente zikwi-beck yakho kwaye tsalela umnxeba u-24/7. Umgama awungomqobo. Ulwimi alusosithintelo nokuba. Nxibelelana nathi namhlanje.
Ngaba awukhethi buso malunga nokukhula ishishini lakho ngenxa yeengxaki zemali okanye ezinye izinto? Sinikezela ngenkqubo yamaxabiso aguqukayo alungiselelwe ukwenziwa kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho. Sikwanikezela ngenkuthazo engakumbi yokusebenzisana nathi, kwaye singavuya ukuba yinxalenye yebali lakho lokuphumelela kweshishini.
I-Semalt yi-arhente egcweleyo yedijithali eyilwe ngamagcisa anetalente azinikezele ekukhuleni okuphezulu kunye nokusebenza kwewebhusayithi yakho. Iingcali kwimiba eyahlukeneyo yokukhula kobukho beshishini elikwi-Intanethi, unokuqiniseka ukuba ufumana ezona talente zilungileyo zemali unokuzithenga, nokuba ungakanani na uhlahlo-lwabiwo mali lwakho. Sifumene ishishini lakho. Siphathe iiprojekthi ezininzi kwixesha elidlulileyo, kwaye ngezantsi kukho ingxelo evela komnye wabathengi bethu abaninzi, abonwabileyo nabonelisekileyo.
Nokuba ubudala okanye ubungakanani beshishini lakho, ungabetha abakhuphisana nabo kumdlalo wabo we-SEO. Fumana nje amagama aphambili aqhuba i-traffic yakho okhuphisana naye kwaye uwasebenzise kwindawo yakho, uyibetha kumdlalo wabo. Musa ukunikezela kwiinjongo zakho zeshishini.
Zeziphi Iinkonzo Azinikezelayo?
KwiSemalt, injongo yethu ephambili kukukhulisa ubukho bakho kwi-Intanethi. Kwaye yonke imihla, sizimisele ukwenza ishishini lakho ngcono. Ezi ziindlela eziphambili esikunceda ekufezekiseni iinjongo zakho zeshishini.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, sifezekise umgangatho wethu osemqoka we-Semalt kunye ne-Web Analyser ukukunceda:
Jonga indlela ebekwa ngayo iwebhusayithi yakho kwiiSERPs.
Chonga iimpazamo zewebhusayithi yakho ezikwiphepha lokusebenziseka.
Jonga ukusebenza kwewebhusayithi yakho
Vuselelwa, kunye neengxelo zewebhu zokungeniswa ngokubanzi.
Ngaphandle kokubonelela ngezi nkonzo kwishishini lakho, sinikezela ngeenkonzo zokuphucula iwebhusayithi eziqinisekisa ukuba ufumana iziphumo zeshishini lakho. Indawo yakho kunye nomxholo uya kuba kwinqanaba eliphezulu ngaphezulu kweqela lakho okhuphisana nalo ngexesha elifutshane kakhulu onokuthi uthathe isigqibo sokusebenzisana nathi.
Ngenkonzo yethu yokuhlaziya iwebhusayithi efanelekileyo, uya kuxhotyiswa ngedatha efanelekileyo yokufezekisa iinjongo zakho zeshishini. Jonga uphononongo lomthengi wethu wenkonzo yokuhlaziya iwebhusayithi.
Iinkonzo zeSemalt ze-SEO
Sinikezela abathengi bethu ngeenkonzo ze-SEO nokuba zithini uhlahlo-lwabiwo mali okanye ubungakanani beshishini. Siyaqonda ukuba udinga iinkonzo ze-SEO zokukhulisa ubukho bakho kwi-Intanethi ukonyusa isiseko somthengi wakho kunye nokuqhuba ingeniso, ngoko ke sidale iiphakheji ezimbini ze-SEO ezifanelekileyo iimfuno zakho zeshishini.
Unokufumana iziphumo ezilungileyo ngaphakathi kwexesha elifutshane elinokwenzeka ukuba uthenga iphakheji ye-AutoSEO namhlanje. Ngexabiso elinesaphulelo esikhulu se- $ 0.99, ubuya kufumana imali yokwenene enexabiso leenkonzo ze-SEO ezilungelelaniswe:
Ukuphucula ukubonakala kwewebhusayithi yakho
Ukusebenziseka kwekhasi kuwo onke amaphepha kwiwebhusayithi yakho.
Ukwenza iinkqubo ezifanelekileyo zekhonkco zokwakha iwebhusayithi yakho.
Amagama aphambili ophando kwishishini lakho le-niche
Iingxelo zokuhlalutya iwebhusayithi zikunceda usete iinjongo zakho zeshishini.
Siyazingca ngokubonelela ngeshishini lakho ngeenkonzo ezifanelekileyo ukuba zikhule. Nantsi ingxelo yabathengi eyonelisekileyo malunga nephakheji yethu ye-AutoSEO.
Unokuqala kwakhona ukukhula kweshishini lakho namhlanje ngephakheji yeAlsSEO. Sikunika eyona nkonzo ilungileyo ye-Whitehat SEO enokuthenga ngayo.
Ngephakheji yethu ye-FullSEO, uqinisekiswe ngeyona misebenzi ye-Whitehat ye-SEO eya kukunceda ubume ngcono kunabo bakhuphisana nabo akukho xesha. Ukudibana nathi namhlanje ukunika ishishini lakho ukonyuka okufunekayo kwi-intanethi ukukhulisa ulwazi lwakho lwe-intanethi. Nazi ezinye zeenkonzo eziphambili zeendlela ze-SEO ezenzelwe ukukhulisa ishishini lakho:
Ukusebenza kwewebhusayithi yangaphakathi nangaphandle
Ukulungiswa kweempazamo kwiwebhusayithi
Ukunyanzelisa iinkonzo zokubhala umxholo
Iinkqubo zokwakha ikhonkco ezibanzi
Inkxaso emva kwentengiso kunye neenkonzo zonxibelelwano.
Akudingeki ukuba uhlehlise ukutyala imali ekukhuleni kweshishini ukuya kuhlahlo-lwabiwo mali olulandelayo. Sitsalele umnxeba namhlanje ukuba sifunde ngakumbi malunga nezicwangciso zethu zokuhlawula eziguqulwayo eziqinisekisiweyo ukuba uqalise ukukhulisa igama lakho kwi-intanethi.
Sineetalente ezinikezelweyo kunye nabazinikeleyo abanobuchule ekwenzeni ividiyo ekwabelwana ngayo nge-intanethi nangaphandle kweintanethi. Ukwafuna iividiyo ezizonwabisa kunye nomtsalane kubabukeli bakho ukuba bazibandakanye neshishini lakho. Iqela lethu lokuvelisa iividiyo linamava ekwenzeni izinto ezibalaseleyo. Udinga iitalente ezilungileyo ukuba ubonise abathengi bakho indlela ishishini lakho elinokubanceda ngayo. Into ekufuneka uyenzile kukusinika umnxeba namhlanje, kwaye siya kuguqula iimbono zakho zibe ziividiyo ezintle zentengiso eziza kukufumana iziphumo.
Indawo yakho yewebhu, njengeofisi yakho engaxhunyiwe kwi-Intanethi, kufuneka yakhiwe ngobuchule ukutsala ukugcwala kwabantu. Uyaqonda ukuba le nkalo yeshishini lakho linokwenza okanye lisebenze ishishini lakho. Kananjalo, kufuneka uvumele iingcali ziphathe iwebhusayithi yakho yokuphuhlisa. Ngaphezulu kweminyaka yethu elishumi yamava okuphatha iiprojekthi zobungakanani obahlukeneyo, unokuqiniseka ukuba iprojekthi yakho yophuhliso lwewebhusayithi isezandleni ezinkulu. Silikhathalele ishishini lakho, kwaye sizimisele ekukufumaneleni iziphumo zeshishini onqwenela ukuzenza.
Yonke imiba yophuhliso lwewebhusayithi yakho ithathelwa ngokufanelekileyo liqela lethu leengcali ezizinikeleyo. Ukusuka kwisicwangciso sobuchwephesha ukuya kuphunyezo olupheleleyo, siyavuya ukukwazisa ukuba sifumene iziphumo ezigqwesileyo zeempawu eziphambili emhlabeni jikelele. Jonga ubungqina obuvela kubathengi bethu abathembekileyo kwaye uqhagamshelane nathi namhlanje.
Dibana noSemalt wakho omncinci uBuddy!
Isilwanyana sethu esisendlini, iTurbo, besiyinxalenye yeqela lethu kwasekuqaleni. Uye waba lilungu elibalulekileyo losapho lakwaSemalt. Nje ngeTurbo, nathi sinokuba yinxalenye yebali lakho lokuphumelela kweshishini. Ngaphandle kwesigaba sokukhula kweshishini lakho, singavuya ukusebenzisana nawe ukufezekisa iinjongo zakho zeshishini.
Nxibelelana nathi namhlanje. Iqela lethu elinobubele nelizinikeleyo kwiingcali zonwabe ekuphenduleni yonke imibuzo yakho malunga nendlela esinokukhulisa ngayo ubukho be-brand yakho kwi-intanethi. Ngaba ukhathazekile ngomqobo wolwimi? Ewe, sonwabile ukukwazisa ukuba abaphathi bethu bathetha ulwimi oluqhelekileyo kunye nawe. Nokuba liTshayina, isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, isiDatshi, iTurkey, njl njl, sithetha ulwimi lwakho. Sitsalele umnxeba namhlanje, kwaye masiqalise ukukhulisa ubukho bakho kwi-Intanethi.